Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti | Aarsaa Kakuu Haaraa New Covenant Ministries
← Furii Wal-Dhabdee
Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu →
15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18]
Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamu cubbu, Waaqayyo waliin araaraamu fi abdi jireenya bara baraa kan argatanii dha. Isaan namoota Waaqayyoof addan ba’an garuu biyya lafa keessa jiratanii fi biyya lafaatti araaraa Waaqayyo labsuuf ergamani dha. Dubbin kun waan bu’ura qabesa lama of keessa qaba: Waaqayyoof addan ba’ani jirachuu fi biyya lafaatti ergaamu. Haa ta’u iyyu male yeroo tokko tokko dubbin kun dagatame argina.
Karaa gama tokko Kristi’yaanoon bayyeen waa’ee Waaqayyoof addan ba’u ykn qulqulla’u daagatu. Dubbi fi jireenyi isaani ayyana fi araaraa karaa Yesus Kristos mul’ate ibsu, agarsiisu, addesuu, labsuu hin danda’u. Sababa kanaf maqan Waaqayyo arabsama. Dhugaa ba’umsi amantoota qeeqama. Karaa bira immo Kristi’yaanoon bayyeen Waaqayyoof addan ba’an / qulqulla’ani yoo jiraatani iyyu waamichi isaani biyya lafaa keessatti—iddo rakkini bayyateetti, iddo cubbun dagagetti, iddo firdi qaajeelaan dhibeetti, lafaa digaa fi wal-dhabdeen guuteetti—araaraa Waaqayyo dubbii fi hojjin labsu ta’u isa dagaatu. Amantiin isaani hojjidhan waan hin mul’aneef dhugaa baaumsii isaanii iddo ga’u dadhaba. Dubbi jireenyaan mirkana’u ta’u dhiise dubbi afaan duwwa ta’a.
Waaqayyoof addan bane biyya lafaa keessatti attamittin Waaqayyoon dubbii fi hojji keenyan mul’isnaa? Jalqaba jalqabee yaadii fi ajjajji Waaqayyo maal ture? Gooftaan keenya Yesus Kristos waa’ee kana maal barsiise? Maal dhugaa ba’e? Ergamooni Goofta woo maal barsiisani? Waldaan Kristi’yaana waa’ee kana maal gocha turte, maalis gocha jirti? Seenaan waa’e kana maal dhugaa ba’a? Haalii bara keenya woo maal nuti dubbata? Nuti akka duuka buutoota Yesus Kristos isa fayyisatti biyya lafaa irratti maal gochuu qabna?
Yeroo gababidu amma qabnu keessaatti gaafiile kanaf debbi kennuf namooni shaan qopha’ani nu giddu jiru. Hunduma caala immo Waaqayyo inni barsiisaa keenya fi oogumaa keenya ta’e nu barsiisuuf akka abdachiisu isaatti nu giddu jira.
Kan kanatti aane jiru, dhihesi shanan keessa isa tokko.
BIYYA LAFA KEESSA MALEE KAN BIYYA LAFAA MITI
15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera.
Wangeela Yohannis boqoona 17 “Kadhata Angafa Lubuumaa Yesus” jedhame beekama. Akkuma seeraa aangafa lubbummatti Gooftan keenya waa’ee saba isaa fuula Waaqayyootti kadhata fi himmata utuu dhiihesu argina. Yeroon itti Gooftan keenya waa’ee dukka butoota isa fuula Waaqayyootti dhiihate kun yeroo ajjefamuun isa jala ga’etti. Kuttan kun Wangeela Yohannis barresse kessatti “Kuta Seena Dhamuu (The Farwell Discourse)” jedhame beekama. Namni yeroo qarqaraa du’a ga’u firoota isa walitti waametu dhimma dhuma itti hima. Keessumaa immo warra itti fufaa isa ta’anitti dubbi ciciimo ta’an itti dabarsa. Wanti yeroo akkasi dubbatamu dhiimoota jajabo dha male dhiima har’a fi borii miti. Dhiimoota jajabo Yesus utuu ergamooni dhaga’ani gara Waaqayyootti dhiihese keessa inni tokko waa’e waltii dhufeenya duuka butoota Yesus fi biyya lafa giddu jiru dha.
Kadhatti kun dubbi wal fallesu waan of keessa qabu fakkata. Yesus, akkuma inni kan biya lafaa hin ta’in duuka buutootin isaas biyya lafa keessa jiru male kan biyya lafaa miti jedha. Haa ta’u iyyu male biyya lafaa keessa akka Waaqayyo isaan baasu utuu hin tane akka inni biyya lafaa keessatti akkan innin isaan eegu kadhata. Kana duwwa osoo hin tane, akkuma Waaqayyo biyya lafaatti isaa erge, inni immo duuka buutoota isaa biyya lafaatti erge.
Dubbi kana keessatti waan arfaan kana argina: 1) isaan biyya lafaa keessa jiru, 2) garuu kan biyya lafaa miti, 3) Gooftaan biyya lafaattan isaan erge, 4) Waaqayyo immo biyya lafaa keessatti isaan eega.
Kutta kana siiriitti hubachuuf jecha “biyya lafaa” jedhu kana xinno ishee itti siqne xinxaluutu nu irra jira. Kara gama tokko biyya lafaa jechuun uumama Waaqayyo hunduma ti. Kun lafa fi waaqa, namaa fi uumama hunduma, waan lafaa fi waaqa keessa jiran hunduma dabalata. Afaan birattin isaa kosmos ykn immo universe jedhama. Faarfannaa 24:1 irratti, “Lafichi, wanti laficha guutes hundinuu kan Waaqayyoo ti, biyyi lafaa fi warri isa keessa jiraatanis kan isaa ti” jedha. Waaqayyo uumama isaa kana hunduma jaallata. Kana jechuun Waaqayyo biyya lafaa fi biyya lafaa irra kan jiran hunduma jaallaata jechuu dha. Sagaleen Waaqayyoos isa kana dhugaa ba’a, akkana jedhe:“Waaqayyo, akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti!” (Yoh 3:16). Eega gam kanan yeroo dubbi kana xinxalu, duuka buutooni Kristos biyya lafa keessa akka jiran, biyyi lafaa ijoo jaallala Waaqayyo (object of God’s love) akka ta’e, itti dabales iddo hojji Waaqayyo itti hojjetamu ta’u isa ni hubanna.
Karra bira immo, Maccafini Qulqulluun biyya lafaa yeroo jedhu dhaaba (establishment) , siirnaa (system), akkata jireenya uumama cubbun kufe (fallen humanity) isa fedha fi jaallala Waaqayyoon alaa (alienation from) fi falla Waaqayyo ta’e (in opposition to) jiratu dubbata. Itti dabaless biyya lafaa yeroo jedhu hojji hammenyaa, madalii fi safaraa (value), illalicha (outlook), fi akkata jireenya (way of life) uumama cubbun gabroofame jechuu isaa ti. Sagaleen Waaqayyo waa’ee kana dhugaa baa’umsa heddutu jira.
Faarfannaa keessatti, “…namoota warra qoodi jireenya isaanii wanta biyya lafa kanaa duwwaa ta’e…(Far. 17:14) jedha. Yohannis Qulqulluun immo “Ifichi gara biyya lafaa dhufeera, namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta’eef, ifa irra dukkana jaallatan; firdichis akkuma kanatti in raawwatama.” (Yoh. 3:19) jedha. Gooftaan keenya immo obbolota isa warra isatti hin amaniin “Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda’u; ana garuu, hojiin isaa hamaa akka ta’e waanan dhugaa itti ba’uuf, in jibba” (Yoh. 7:7) jedha. Akkasumas immo, warra mormitoota isaan “Isin kan goodaa kanaa ti, ani immoo kan gubbaa sanaa ti; isin kan biyya lafa kanaa ti, ani garuu kan biyya lafa kanaa miti.” (Yoh 8:23) jedha. Waa’ee duuka buutoota isaa immo, “Kan biyya lafaa utuu taatanii, biyyi lafaa akka kan isaatiitti isin in jaallata ture; amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fo’ate malee, isin kan biyya lafaa waan hin ta’iniif, biyyi lafaa isin in jibba” (Yoh 15:19) jedhe.
Duuka buutooti Kristos biyya lafaa kana keessa ayyana Waaqayyoon karaa Yesus Kristos birmadu ba’an. Sexxana fi hojji isaa ganani, dukkana gara ifatti, badisa gara jireenyatti waamaman. Siirna, dhaaba, madalii fi safaraa akkasumas illalcha biyya lafaa dhiisani diina Waaqayyo ta’utti gara ijoolee Waaqayyo ta’uti wamaman. Kanafu isaani si’achi kan biyya lafaa miti.
Akkuma Kristos Waaqayyoon mul’isuuf ergame gara biyya lafa dhufe, duuka buutooni Kristosis hojji Waaqayyoof akka dhugaa baa’aniif biyya lafaatti ergamani. Biyyi lafaa iddo hojjin Waaqayyo itti hojjetamudha. Fayyisun, garuumman, ayyani, humni, eebbi, waluma-galatti hojjin Waaqayyo biyya lafaa irratti mul’ata. Kanafu Yesus “Mootummaan waaqaa waan dhi’aateef, yaada garaa keessanii geddaradhaa!” jedhe biyya lafa irratti lallabe. Bartoota isaatiin immo “Egaa yommuu kadhattan, ‘Yaa isa waaqa irra jirtu abbaa keenyaa! Maqaan kee qulqulluu ta’ee haa eegamu; 10 mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqa irratti akka ta’u, akkasuma immoo lafa irratti haa ta’u!” (Mat 6:9-10). Jaallali Waaqayyo waaqa irratti kanan dura ta’e jira. Hojjin, dhuga baa’ums, ergan, waamichi, kadhanan, dhama’ain keenya kan barbachisu biyya lafaa fi warra isaa keessa jirataniif.
Eega waamichi keenya biyya waaqaf utuu hin tane biyya lafaaf. Kanafu mudhii keenya hidhane qophe’e barbachiisa hunduma guutane hojjidhaf biyya lafaa kana irratti boba’un dirqama keenya, itti gafatama keenya, waamicha keenyas. Waamichi kun siirna biyya lafaa gaanu, Kristos duuka bu’u, itti gafatama sagalee gammachu fayyisu Waaqayyo qabatani namoota dhukuba cubbun qabamanii rakkatan giddu dhaqani labsiidhan, hojjidhan gaatii inni namaa basiisu baasan hojjechu nama gafata.
Akka duuka buutoota Kristostti Jireenyi keenya Waaqayyoof addan baa’u ykn qulqulla’u namaa gaafata. Addan baa’uun waan namaa xuresuu danda’u irra fagachuu dha. Waaqayyof of qulqullesuun:
Namoota warra akkata nuti Waaqayyoon hubanuutti hin hubane irra, warra cubbamo irra, warra rakkato irra of fagesu miti.
Utuu dubbin akkas ta’e eenyun keenya iyyu gara Waaqayyo dhufuf carra hin qabnu ture. Waaqayyo yeroo nuti cubbun duune turetti karaa ilma isaa dhufe nu barbade.
Ofif ykn ol-antuma qabachuuf ykn nama gudda ta’uf jecha warra kan irra fagatani dhabachu jechu miti.
Waaqayyoof of qulqullesuu jechuun:
Waaqayyoon beeku fi isaa soodachu kan ka’e hameenya irra fagachu, ulifina ofi ulfina Waaqayyoof bulchu, waan ulfina Waaqayyoo fi gaaruuma namootatiif ta’u hojjechu jechu dha.
Kan of osoo hin tane kan Waaqayyoo, kan namoota biraa dursu jechu dha.
Biyya lafaatti ergamuun immo waan namaa xuresuu danda’u irra fagatani namooni biranis Waaqayyo beekan waan hamaa irra akka fagataniif dhama’uf. Waaqayyoof addan ba’ani utuu kan biyya lafaa hin ta’in, utuu akka biyyi lafaa ilaluutti hin illaliin, utuu akka biyya lafaa jaallatuutti hin jaallattin, utuu akka biyyi lafaa soodatutti hin soodattin, biyya lafaa keessa jirachuun dha. Kun immo dhiima salpha miti.
Dubbi kun dhimma jireenya kessatti dhibaa ta’an keessaa warra aangafa ta’an kessaa isa tokko. Jireenyi namaa dhimaa haarkifamu (dhifamu) ti. Jireenyi wanta harkiisa adda addaa qaban ykn waan garana fi garas illalaan, garanaa fi garasiitti waan nama harkiisan adda adda waliitti qaban bachuu nama gaafaata. Gababatti jireenyi waan waliin morman lama al-tokkicha walitti qaban bachuu gaafata.
Namni gaaru dhifamu ykn harkiifamu irra waan salpha filachuu jaallata. Kanafu sagalee Waaqayyo dhageefate jireenya isa Waaqayyo jalatti gad-qabe, dhiima jireenya ofi isa Waaqayyootti gatte jirachuu irra karaa mata isa duuka bu’u filata. Dubbiin kun yeroo nuti Kristiyanoota tanu ofuma isan nu irra hin deemu. Kristiyanumatti makate isuma duraan barbaduu sana iddon ga’achuuf caraaqa. Ammas sababa kana irra kan ka’ee dubbiin itti salphatu ‘dhiimi biyya lafa kana anan nan galchuu’ jedhe biyya lafaa irra baqachuu ykn immo waa’ee Waaqayyoof addan of basu itti dhiisee ‘alamiin boola oli, kanafu waan garaan koo fedhe hunduma naan guutaadha’ jechuudhan akkata jireenya fi sirna biyya lafaatti qabame jirachuu filata.
Kana irra kan ka’e warri kaan nuti dhimma biyya lafaa kana keessa qooda hin qabnu kanaf dhiimma hawwasuumma fi dhimma siiyasa keessa hin seenuu jedhu. Warri kaan immo dhiimi hawwasaa, siiyasaa fi jireenya biyya lafaa duuka bu’anii waa’ee Waaqayyoof qulqullanii jirachu itti dhisuu.
Eega dhiimi isa, nuti warri duuka buutoota Kristos tane attamitti, waan garaana fi gaarasiitti nama harkiisu madale, safaraa ykn balance eegne jirachuu dandeenya? Akka duuka butoota Kristostti itti gafatamni keenya maalii? Maal gochuu qabna? Kan jedhu dha.
Dhugaa jiruu simane fuudhachuu qabna.
Biyyi lafaa uumama Waaqayyo ti. Garuu biyyi lafa kun dhukuba cubbun qabame dhukubsata ta’e jira. Biyyi lafa Waaqayyof bulu irra karaa ofi isaa, karaa badisa filate dukka bu’a jira. Waaqayyo garuu badisa biyya lafa hin fedhu. Kanafu amma Tokkicha Ilma isa erge karaa isa kana fayyina biyya lafaaf karaa saquutti biyya lafaa jaallate. Dhukuba biyya lafaaf fayyini karaa Yesus Kristos male karaa bira hin jiru. Kristos abba qoriicha ti. Dhukufatan immo yoo yeroof hubachuu dhabate iyyu abba qoriicha beekun, fayyinaaf gara isaa dhufun isa barbachiisa.
Biyyi lafaa inni dhukuba cubbun qabame kun fayyisa inni karaa hundumaan fayyina fidu akka jiru, akka inni badisa cubbamoota hin feene, cubbamaan hundinu garaa isa dhufe fayyina argachu akka danda’u nama itti ibsu barbachiisa.
Garuu dubbin kun dubbi afaaniin labsu duwwa miti. Jireenyi keenya guutuumaan isa kana irratti boba’u qaba. Waaqayyoon kan waaqeesinu, kan tajajilu, kan sagadnuuf, kan waa’ee gaaruumma isa dhugaa banu afaan duwwan utuu hin ta’iin hojji keenya isa jaallala isa mul’isuun ta’u qaba.
Amantiin, Jaallalii sagale hojji ti male sagale waan addesuuf ykn ibsuuf dhiima itti ba’an miti. Amantii fi jaallalii hojjitti nama bobaasu. Faith and love are action words, not adjectives.
Kun maal gaafata?
Namoota yaadaa garaa isaani hubanan qaban ta’u qabna.
Gal 6:8 “Namni akka yaada foon isaatiitti facaasu, yaada foon isaatii sana irraa badiisa in galfata; akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya bara baraa in galfata.”
1Xim.1:19 “Kanaafis amantii, yaada garaa qullaa’aas qabaadhu! Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru.”
Sirna fi akkata jireenya biyya lafa ganuu fi tuufachu qabna. Jaalalii biyya lafaa inni Waaqayyoon sodaachuu fi amachuu hin qabne badiisa fida.
2Xim 4:10 “Deemaas biyya lafaa kana jaallatee, ana buusee mandara Tasaloniiqee dhaqe.”
Waamichi keenya maal akka ta’e fi maaliif akka ta’e hubachu qabna.
Mat. 5:13-16 “Yesus itti fufee, “Isin soogidda lafaa ti, soogiddi garuu miyaa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi’ee miyeeffama ree? Gad baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee, homaa tokkoofuu waa’ee hin baasu. 14Isin ifa biyya lafaa ti, mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda’u. 15Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa’u, baattuu ibsaa irra kaa’a malee; ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. 16Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii, abbaa keessan isa waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanaatti namoota duratti haa ifu!” jedheen.
Caalaatti waa’ee soogidda lafaa ta’u keenya, lallaba Isin soogidda lafaa ti jedhu kana caaqasa.
Soogiddi midhaan miyyesuuf midhaan mi’a hin qabnetti naqamu qaba. Yoo soogiddi midhaan mi’a hin qabne kun mi’a naa dhabisiisa jedhe itti siquu, itti firomuu, waliin hojjechu fi waliin dhabachuu dhiise, yoo midhaan mi’a hin qabnetti naqame hin mi’esu ta’e maaliif dhiima basa?
Midhaan mi’a hin qabne hin jiruu yoo ta’e, bu’a fi mi’an soogidaa maal? Soogdii midhan mi’a hin qabne mi’esu dha. Kanafu soogddii “soogidda lafaa ti” male soogidda waaqa miti.
Yoo infni ‘ani dukkanatti dhiima hin qabu, dukkani mormitu kootti’ jedhe dukkana baqatee maaltu ta’a? Maaliif ifni dukkana baqata? Maaliif ifni dukkanaaf karaa hila? Dukkanatu ifa soddata male, irra baqata male, ifa duratti gaatii fi hiika dhaba male, ifni sababa dukkana soddatuuf hin qabu.
Dukkani hin jiru yoo ta’e ifni maal dhiima basa? Ifni ifa biyya lafaa ti male kan biyya Waaqa miti. Mandara Waaqatti “Biiftuun yookiis ji’i mandarattii irratti ibsuun barbaachisaa miti; ulfinni Waaqayyoo ifa ishee ti, hoolichis ibsaa ishee ti!” Mul. 21:23.
Sodaan dukkanaa ifa. Dukkani akka ifa waan soodaatu hin qabu. Ifni xiqqon ishe dukkana isa gudda fi jaba jilbeenfachi ti. Dukkanatu ifa soodate dhokaata male, ifni dukkana hin baqaatu. Ifni ifa isa dukkanatti ibsetu humna dukkana caabsa.
2Qor. 5:17-20 17 Kanaafis namni kan Kristos yoo ta’e, uumama haaraa dha; inni moofaan darbe, kunoo inni haaraan dhufeera. 18 Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kristos ofitti nu araarse biraa ta’e; inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. 19 Kunis, Waaqayyo irra-daddarbaa namootaa itti lakkaa’uu dhiisee, karaa Kristos biyya lafaa ofitti araarse jechuu dha; ergaa araara isaa kana immoo hadaraa nutti kenne. 20 Egaa nuyi afaan Kristos taanee ergamneerra; Waaqayyos karaa keenya isin in dhageessifata; “Waaqayyotti araaramaa!” jennee qooda Kristos taanee isin in kadhanna.
Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti — 1 Comment
ADISU GAROMA on May 7, 2017 at 4:50 pm said: